8 Maarso Iyo Khudbadii Hogseegtay Ee Muuse Biixi.
Xukumada Somaliland Oo Ruqsadii Isgaadhsiinta Kala Noqotey Laba Shirkadood.
Maalintii Khamiista ee 8/03/2018 waxay ku beegnayd Maalinta Haayada Qaramada Midoobay u astaysay Haween waynaha Dunida.
Maalintan Waxaa loogu talogalay in lagu xuso horumarka ay Haweenku ka sameeyeen dhinacyada kala duwan ee Nolosha Aadamaha sida Sinnaanta, Caddaalada, Waxbarashada, Shaqada, Ganacsiga, Siyaasada IWM. Waxay kaga miqyaas qaataan meeqaamka ay ka joogaan Bulshooyinka ay ka tirsan yihiin, wixii u qabsoomay iyo waxyaabaha u astaysan inay ku talaabsadaan mustaqbalka.
Maalintan oo kale Haween waynaha Dunidu waxay ka fishaan Bulshooyinka ay ka tirsan yihiin iyo Xukuumadaha ay ku hoos nool yihiin oo Dunida oo dhan u badan
nooca loo yaqaan (Patriarchal societies) ama Raggu Awooda sare leeyihiin, Qorshayaal dhiirigelinaya horumarkooda.
Waxa kale oo lagu dhiirigeliyaa adkaynta Nabadgelyada Caalamka maadaama Adduun waynuhu isla qirsan yahay in cidda ugu badan ee Colaaduhu sida ugu daran u sameeyaan yihiin Haweenka iyo Carruurta, khaasatan iyadoo Haweenka ay u dheer tahay in Colaadaha ay kala kulmaan Kufsi iyo Faraxumayn aan xad lahayn, marka laga yimaado dhibaatooyinka kale ee Caamka ah.
Haddaba waxaynu ka dheregsanahay in Haween waynaha reer Somaliland ee Muuse Biixi Madaxweynaha u yahay ay ku gadaaman yihiin duruufo aad iyo laxaad u qalafsan, una baahan Qorshayaal cad cad oo wax lagaga qabto.
Tusaale ahaan Muuse Biixi wuxuu Madaxweyne ka yahay Dal Malaayiin Hablo ahi aanay fursad u haysan inay helaan Waxbarasho, Caafimaad, Biyo nadiif ah iyo dhammaan adeegyada aasaasiga u ah Aadamaha. Waxaa jira Maalaayiin Hablo iyo Hooyooyin ah oo Meelo fog fog oo ay Saacado u socdaan ka doonta Biyo ay Jidiinka mariyaan ama wax ku karsadaan.
Waxaa jira Kumanaan Haween ah oo maalin kasta isku ummul aroora dayac caafimaad iyo Dhakhaatiir la,aan awgeed. Xukuumada uu hadda isagu Madaxweynaha ka yahay iyo tii ka horaysay ee isla Xisbigiisu hogaaminayayba way ku fashilmeen inay wax muuqda ka qabtaan Baahiyahaas.
Tusaale ahaan, Xukuumadii Kulmiye ee Siilaanyo hogaaminayay waxay ishortaagtay in Biyo looga soo saaro Deegaanka Xumboweyne qaybo ka mid ah Caasimada Hargaysa, waxaana saldhig u ahayd Qabyaalad ay Xukuumadaas lafteedu dabada ka riixaysay. Ilaa hadda Muuse Biixi iyo Xukuumadiisu kamay shaafiyin Shacabka reer Hargaysa sababta Mashruucaas Tabaruca lagu soo helay u fashilmay iyo halka kharashkii lagu fulinayay ku dambeeyeen. Haweenka Xaafadaha kala duwan ee Hargaysina sidii bay weli safaf ugu jiraan inay helaan Jirikaan Biyo ah.
Marka sidaas Xaal yahay waxaa Haween waynaha reer Somaliland uga fadhiyeen inuu u soo bandhigo Qorshayaasha Xukuumadiisu u diyaarisay wax ka qabashada Duruufahaas adag ee ku gadaaman Haweenka Somaliland.
Nasiib darro taasi may dhicin. Waxaase ummadii Warbaahinta ka daawatay Khudbadii uu Munaasibada 8 Maarso ka jeediyay Yaab iyo Amakaag ku noqotay halka uu ka fadkudiyay, waxaanay runtii ahayd Khudbad marin seegtay oon sinaba ugu haboonayn Madasha uu ka jeediyay.
Muuse Biixi wuxuu Madasha uga jawaabay Xukuumada Xamar isagoo tixraacay Tacadiyadii iyo Gaboodfalyadii ay Xukuumadii Siyaad Barre Shacabka reer Somaliland, khaasatan kuwa Beesha Dhexe u gaysatay, isagoo arrinkaa Eed uga dhigaya Madaxweyne Farmaajo oon isagu ku lug lahayn hase yeeshee uu ugu aanaynayo hab reernimo.
Qolooyinka reer Galbeedka ayaa markay qof aanay taageersanayn ama la Jaal ahayn u arkaan in laga khaldan yahay yidhaahda “Devil’s advocate” bal aan Shaydaanka u doodno, Soomaaliduna waxay ku tiraabtaa “Gaal dil, gartiisana sii”, waxaan uga socdaa markaad eegto labada Nidaam ee Muuse Biixi iyo Farmaajo Kursiga Madaxweynimo ku fuuleen, haba kala duwanaadeene, waxaynu Daliil cad u haynaa in isaga doorashadiisa Dhiig ku daatay. Sidoo kale in Muuse Biixi qayb ka ahaa Xasuuqii Dila iyo Boorame ka dhacay iyo Dagaalkii sokeeye ee 1994 dhexmaray Beesha Dhexe.
Waxay ahayd in Munaasibadan Haweenka reer Somaliland ugu baroordiiqaan Marxuumad Deeqa Cabdillaahi Jaamac oo ahayd Hooyo Dan yar ah oo Caano ay Suuqa ku iibiso ka biilin jirtay Carruur ay dhashay iyo Amaal Cabdillaahi Cumar oo iyana ahayd Ardayad oo labaduba ka mid ahaa Shicibkii aan hubaysnayn ee Ciidamada RRU laayeen si Muuse Biixi Kursiga Madaxweynaha ugu fadhiisto. Su’aashu waxay tahay ileen Farmaajo Siyaad Barre maahee, iyamaa Taariikh xun labadooda.
Waxaan ku soo ururinayaa Maqaalkan Muuse Biixi isagaa la hubaa inuu marna Inaadeerkii Maxammed Cabdillaahi Xamar u dirto si ay Danihiisa uga soo fuliyaan marna Gabadh yar oo Miskiin ah Xamar bay tagtay u xidhee, ummada Mawqifkiisa ha u caddeeyo.
Shacabka reer Somaliland iyagaa ilaashanaya Dalkooda waxayse Muuse Biixi uga baahan yihiin kana sugayaan inuu ka shaafiyo arrimahan hoose:-
1) Inuu Baarlamaanka keeno Heshiiska DP World iyo Itoobiya la kala saxeexday oo dhammaystiran si loo naaqisho, loona lafaguro bal waxa Faa’iido ugu jirta Qarankan.
2) Inuu Shacabka u sharxo sifaha ay Itoobiya ku heshay Saamiga 19% ah.
3) Inuu Baarlamaanka hor keeno dhammaan Dukumentiyada Shirkada Dubai laga diiwaan geliyay ee Somaliland Investment Company.
4) Inuu Shacabka reer Hargaysa ka qanciyo sababta Mashruucii Xumboweyne u fashilmay iyo halka Dhaqaalihiisii ku dambeeyay.
5) Maxkamad la horkeeno ciddii ka dambaysay Dilkii loo gaystay Dadkii lagu laayay iyo kuwii lagu dhaawacay Bishii November 2017 magaalooyinka Burco, Hargaysa, Ceerigaabo iyo Boorame.
6) Sababta Xildhibaanada Oodweynu u xidhan yihiin.
7) Wax ka qabashada Saami qaybsiga Xukuumada ee dhinaca ka raran iyo qaar kaloo badan.
Wakhtigii Borobogaandadu (political spin) way dhammaatay, waxaana ii muuqata in (spin Doctors) Muuse Biixi lasoo taliyay yihiin Bayt gaabyo waayo Khudbaduna ma ahayn mid wakhtigeedii joogta, Madasha uu ka jeediyayna may ahayn Madasheedii.
Maxammed Aw Yuusuf Guun.